Nezvedu - Quanzhou Minpn Electronic Co., Ltd
Quanzhou Minpn Electronic Co., Ltd yakavambwa muna 2004,
Nyanzvi mukugadzira, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwezvemagetsi zvemotokari.
Kusanganisira kupaka sensor system, mota alarm system, mota tire pressure monitoring system, mota bofu nzvimbo yekuona system, mota musoro kumusoro kuratidza system nezvimwe.
Iyo kambani inovhara nzvimbo ye6666 m², ine chirimwa nzvimbo ye3600 m²;kune vashandi vanopfuura zana negumi uye vanopfuura makumi maviri nyanzvi dzeR&D vanhu, vane hunyanzvi hwekugadzira gore negore hwemazana matanhatu ezviuru zvema radar masisitimu uye mazana matatu ezviuru zveTPMS.
MuMinpn fekitori, mitsetse yekugadzira ine mitsara yekutanga-ye-iyo-otomatiki michina, kubva kuSPI, SMT muchina, AOI bvunzo muchina, wave solder muchina, yakakwirira-chaiyo mold kugadzirisa muchina maturusi kuenda kumberi mumutsara uye kuyedza lab. equipments.
Iine makore gumi nemanomwe ruzivo rwehunyanzvi rwaunganidzirwa, Minpn yave mutungamiriri akakosha muOEM & aftermarket muChina, iine zvakawanda muR&D kugona, kugona kwakatanhamara kweOEM sevhisi, kugona kugadzirwa kwakamisikidzwa uye kugona kudzora mhando yakavimbika.Iine mutengi-inotungamirwa uye yemhando-yakatarisana nemusimboti, Minpn yagara ichishanda kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi.Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakajairika kune ese mavhiri emota mana, akatengeswa kunze kwenyika kuSoutheast Asia, Middle East, Europe, US, uye Taiwan.Minpn yakadomwa se 'nyanzvi yekuchengetedza yekupaka' muindasitiri yemotokari.
1.professional rader laboratory inogona kuedza mepu yehamvuropu, sensitivy, aftershock, etc.of radar, uye inogonawo kuedza kutarisa kwekutsvaga mushure mekunge radar yaiswa.
2. nyanzvi yemagetsi ekushanda murabhoritari, inogona kuyedza yakakwira voltage, yakanaka uye isina kunaka reverse connection, pulse voltage, surge, ESD nezvimwe zvinhu zvemagetsi.
3. Professional kuvimbika murabhoritari, inogona kuedza kushanda uye hupenyu hwechigadzirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaoma uye dzakaoma.Midziyo mikuru ndeiyi: inogara tembiricha uye humidity test room, thermal shock test room, munyu wekupfapfaidza bvunzo muchina, ultraviolet mamiriro ekunze ekuyedza kamuri.Vibration bvunzo muchina, donhwe bvunzo muchina, simulated vibration bvunzo muchina, nyanzvi ROHS bvunzo michina.
Iyo kambani ine yemazuva ano isina guruva workshop, inogara tembiricha uye humidity warehouse, yepamusoro-tech otomatiki SMT mitsara yekugadzira, lead-isina wave solder mitsara uye zvimwe otomatiki zvigadzirwa zvekugadzira.
1.Mature IATF16949 manejimendi system
2.ERP manejimendi system
3.Domestic uye kunze kwenyika mutengi manejimendi system
4.Passed IATF16949 quality management system certification uye ISO14001 Environmental Management System certification
5.Obtained yenyika yepamusoro-tech bhizinesi retifiketi retifiketi
6.Obtain CE, FCC, ROHS, EMARK, NCC uye zvimwe zvigadzirwa zvitupa
Yakagadzirwa Fuzhou Minpn
Electronice Technolog Co,.Ltd
Yakapfuura iyo ISO/TS16949.
Akava mutengesi we
Sou East modhi.
Minpn yakaenda kuruzhinji uye yakatumidzwa zita rekuti "Quanzhou Minpn Electrinic Co,. Ltd."
Yakamhara paNEEQ (Nationl Equities Exchange uye Quottatios) uye ive kambani yakanyorwa.
Akapfuura IATF 16949
Yakagadzira New R&D Center muXiamen
Kudzora Hunhu kunoitwa nenzira kwayo yese yekugadzira, kubva kuIQC kuenda kuPQC.Zvigadzirwa zvakasiyana, zvemhando yepamusoro, vashandi vane ruzivo, michina yemhando yepamusoro uye ISO 9001, ISO/TS 16949 certified system ndiyo vimbiso yezvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro.
Car Parking Sensor, Tire Pressure Monitor, Buzzer Parking Sensor, Kupaka Sensor, Radar Parking Sensor, Tire Security Muedzo,